Kodzero-dzevanhu, 18 Nyamavhuvhu 2019
Svondo 18 Nyamavhuvhu 2019
Nyamavhuvhu 18, 2019
SADC Inoti Zvirango paZimbabwe Ngazvibviswe Asi Vamwe Vachiishora neKusataura neZvekodzero dzeVanhu
Vatungamiri venyika dzemuSADC kusanganisira mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kupeta musangano wavo wepagore kana kuti SADC summit kuTanzania.
Mapurisa Orambidza MDC Kuratidzira muBulawayo
Mapurisa emuBulawayo arambidza zvekare bato rinopikisa reMDC kuratidzira muguta iri mangwana achiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika uye panogona kuita mhirizhonga.
Nyamavhuvhu 17, 2019
Sachigaro veMDC, Muzvare Thabitha Khumalo, Vanosungwa neMapurisa
Sachigaro weMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa, Muzvare Thabitha Khumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato ravo vatanhatu, vasunga neMugovera nemapurisa muBulawayo.
VaMnangagwa Votambidzwa Chimuti neMutungamiri weZambia, VaEdgar Lungu
Mutungamiri wenyika, Va Emmerson Mnangagwa, vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro wekomiti yeSADC inoona nezvematongerwo enyika, pamwe nekugadzikana kwedunhu iri.
Hurumende Inomwaya Mapurisa muBulawayo
Mapurisa anodzivirira mhirizhonga aswera achitenderera muguta reBulawayo zvichitevera zhowe zhowe yakaitika panze pedare ramajasitireti neChishanu manheru zvichitevera mutongo wakapihwa Ishe Felix Nhlanhlayamangwe Ndiweni.
Bishop Ancelimo Magaya Vomira neKuratidzira Kwanga Kwarongwa neMDC
Mutungamiri weZimbabwe Devine Destiny, Bishop Ancelimo Magaya, vanoti pasi pebumbiro remitemo yenyika, mapurisa haana masimba ekurambidza vanhu kuratidzira.
Guta reHarare Roberekera Ingwe
Guta reHarare ravharwa neChishanu mushure mekunge zviuru zvevanhu zvaenderera mberi zvichiratidzira kuoma kwaita hupenyu munyika uye mapurisa anodzivirira nyonga-nyonga achishandisha mboma nehutsi hunokachidza kudzinga vanhu vange vachiratidzira ava.
Dare rePamusoro Rinoti Harikwanisi Kunzwa Chikumbiro cheMDC
Mutongi wedare repamusoro, VaJoseph Musakwa, vatura mutongo wekuti MDC yanga ichifanira kuenda kudare ramejasitiriti nechikumbiro charo kwete kuuya kudare repamusoro.
VaMnangagwa Votora Chigaro cheSADC MDC Ichugunun'una
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vasvika kuTanzania kumusangano we wevatungamiri wenyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC Ordinary Summit of Heads of State and Government wechimakumi matatu nemapfumbamwe.
Mapurisa Anoti Arambidza Kuratidzira; VaChamisa Vachiti Kuratidzira Kuchaenderra Mberi
Manheru anezuro, mapurisa akazivisa kuti varambidza kuratidzira kurikuda kuitwa nebato reMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa.
Mapurisa Ozara Mumigwagwa yeHarare neChitungwiza
Mapurisa ane zvombo zvehondo aswera ari mumigwagwa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta guru renyika, ukuwo vechidiki veZanu PF vachiti havasi kuzobvumidza mhirizhonga pakuratidzira kuchaitwa neMDC neChishanu.
Vanorwira Kodzero dzeVanhu Voshushikana neKutyorwa kweKodzero dzeVanhu
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nekusachengetedzeka kwevanhu zvichitevera kupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kuri kuda kuitwa neMDC nemusi weChishanu.
Dare reSenate muAmerica Roenderera Mberi Richinzwa Nyaya Iri Kupomerwa VaTrump
Vakawanda Voshuvira Chikwata cheNhabvu Rakanaka Murwendo rweku 2022 World Cup
ZDI Inoti Command Agriculture Iri Kuvhiringwa neNyaya dzeMatongerwo eNyika
Zimbabwe Community in South Africa Yokurudzira Kutorwa kweMatanho paNyaya yeKuparwa kweDzimhosva muJohannesburg